प्रकाशकीय : चुनौतीका बेला हाम्रो परीक्षा असल पत्रकारितालाई प्रवर्द्धन गर्ने व्यावसायिक सञ्चारगृह बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो । त्यसैले हामीले आफ्नो नारा बनाएका छौँ : खबरको स्थायी ठेगाना Share
चुनाव जित्न ओली बुन्दै छन् धर्मनिरपेक्षता फाल्ने डाेकाे Share
सूर्यबहादुरले झोक्किँदै भने, 'जानोस्, बीपीलाई भन्नुस् यस्ता कुरा' Share
प्रिय नगर 'घाटी'लाई पत्र Share
‘संविधानको विनाशको बीजारोपण बन्द गरौँ, राष्ट्रिय सहमतिमा मात्रै चुनाव गरौँ’ Share
विचार थप पढ्‍नुहोस्
‘संविधानको विनाशको बीजारोपण बन्द गरौँ, राष्ट्रिय सहमतिमा मात्रै चुनाव गरौँ’ बिरुवा लगाउनेले बिरुवालाई धैर्यपूर्वक जलमल गर्नुको साटो उखेलेर जरा हेर्ने परिपाटी हामीले विगत महिनामा देख्यौँ । अब जरा हेर्न खोज्नेले र जरा हेर्न नदिनेले नयाँ दायित्व लिनुपर्नेछ7min read
खराब छैनौँसमेत भन्न किन सक्नुहुन्न तपाईं पुरुषहरू ? जबसम्म छोरीलाई छोरासरह हुर्कने, घुमफिर गर्ने वातावरण बन्दैन तबसम्म यस्ता घटना रोकिँदैनन् । छोरालाई शक्तिशाली, बलशालीका रुपमा हुर्काउने घरपरिवार र समाजले तिमी अपराधी बन्न हुन्न भनेर कहिल्यै सिकाएको छ ? 15 min read
तपाईं नपत्याइराख्नुस्, हामी अघि बढिरहन्छौँ तपाईं हामीलाई नपत्याइराख्नुस् हामी अघि बढिरहन्छौं । जुनदिन हामी क्रान्तिको बिगुल बजाएर तपाईंको अन्तस्करणसम्म तरंग ल्याउनेछौं त्यही दिन हामीलाई पार्टी मान्नुहोला । हाम्रो झण्डा बोक्नु होला । हामीसँगै एकाकार हुनुहोला । हामी पर्खने छौँ तपाईंको मन-मस्तिष्कमा क्रान्ति अंकुरण नहुँदासम्म ।9min read
राष्ट्रसंघकाे समेत प्रशंसा पाउनेगरी चीनले गरिबी निवारणमा यसरी गर्‍यो चमत्कार दाबी गरिएका यी उपलब्धिहरूको संयुक्त राष्ट्रसंघ वा त्यस्तै स्वतन्त्र र तटस्थ बौद्धिक निकायद्वारा आलोचनात्मक जाँचबुझ हुन बाँकी नै छ र त्यो हुन आवश्यक पनि छ 12 min read
ब्लग थप पढ्‍नुहोस्
प्रिय नगर 'घाटी'लाई पत्र मुसा मानुष पढिसकेपछि तिमीलाई पनि न्युयोर्क शहरमा आएर यहाँका ख्यात नाम मुसासँग मुसा संवाद गर्ने कस्तो रहर होला । सबै बन्दोबस्ती यहाँका मुसाहरू गर्दै छन् । तिमी त्यसै overrated भएका होइनौं 20 min read
कृष्णप्रसाद, मनमोहन, मदन र बीपीलाई पनि भ्रष्ट भन्दिने ? भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी हुन्छन्, कांग्रेस हुँदैनन्, एमाले हुँदैनन्, माओवादी हुँदैनन्, जनमोर्चा हुँदैनन्5min read
सम्पादकीय थप पढ्‍नुहोस्
विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गराैँ एउटा कठाेर निर्णय गराैँ : गुन्डागर्दीलाई वैधानिकता दिन चलाइएका यस्ता विद्यार्थी संगठनहरूकाे खारेजी । किनभने पटक पटकका घटनाक्रमहरूबाट प्रष्ट भइसक्याे– विश्वविद्यालय र विद्यार्थी संगठन अब सँगसँगै जान सक्दैनन् 8 min read
परीक्षा– हाम्रो सामूहिक विवेकको प्रतिपक्षी कांग्रेस बोल्न त बोलेको छ । तर, उसको वाणी शून्यमा शून्यसरी बिलाएको छ । विगतकाे उसकाे सत्तायात्रा क्रममा केसीकाे आन्दाेलन जारी नै थियाे । याे यथार्थ कसैबाट छिपेकाे छैन
संविधान स्थायित्वका सर्तहरू